Tatuantes bu webusaiti nke Actualidad Blog. Anyị website raara nye ụwa nke ahụ nka, karịsịa nye egbugbu kamakwa ịkpọpu akụkụ na ụdị ndị ọzọ. Anyị na-atụ aro atụmatụ mbụ mgbe anyị bu n'obi ịnye ozi niile gbasara otu esi enweta egbugbu, nlekọta anụ ahụ, wdg.
Ndị nchịkọta akụkọ nke Tatuantes mejupụtara omiiko banyere uwa nke tattoos na aru nka obi dị gị ụtọ ịkọrọ gị ahụmịhe ha na ihe ọmụma ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso na ya, egbula oge dere anyị site n'ụdị a.
Ruo ọtụtụ afọ, enwere m mmasị na ụwa nke igbu egbugbu. Enwere m ọtụtụ na ụdị dị iche iche. Omenala ọdịnala, Maori, Japanese, wdg ... Ọ bụ ya mere m ji nwee olileanya na ị ga-enwe mmasị na ihe m ga-akọwa banyere nke ọ bụla n'ime ha.
Onye na-akwado usoro ejiji neo na nke a na-ahụkebe na nke a na-akpọ freaky, ọ dịghị ihe dịka mpempe akwụkwọ nwere ezigbo akụkọ n’azụ ya. Ka m na enweghị ike ise ihe ọ bụla gbagwojuru anya karịa mkpịsị bekee, m ga-ekpebi maka ịgụ ihe, ide ihe banyere ha ... ma mee m ha, n'ezie. Nganga na-ebu isii (ụzọ asaa) akara. Oge izizi m tụrụ egbugbu, enweghị m ike ile anya. Oge ikpeazụ, ụra buru m na gurney.
Nwanyị gburu egbugbu, onye nkụzi agụmakwụkwọ pụrụ iche, ọkà mmụta gbasara mmụọ na ịnụ ọkụ n'obi banyere ide na nkwukọrịta. Ahụrụ m egbugbu n'anya na mgbakwunye na iyi ha n'ahụ m, ọ na-amasị m ịchọpụta na ịmụtakwu banyere ha. Ogbugbu obula nwere ihe ezoro ezo ma obu akuko nke onwe ya ... kwesiri ichota.
Ebe ọ bụ na m dị obere, enwere m anya na ihe m bụ ịbụ onye nkuzi, mana na mgbakwunye na inwe ike ime ya ọfụma, enwere ike jikọta ya n'ụzọ zuru oke na oke agụụ m ọzọ: Ide banyere ụwa nke egbugbu na ịkpọpu akụkụ. N'ihi na ọ bụ ngosipụta kasịnụ nke iburu ihe ncheta na oge dịrị na akpụkpọ ahụ. Onye ọ bụla ghọrọ otu, na-ekwughachi ya, m na-ekwu ya site na ahụmahụ!
M omiiko banyere nnọọ ihe niile na-eme na tattoos. Stylesdị na usoro dị iche iche, akụkọ ihe mere eme ha ... Enwere m obi ụtọ banyere ihe a niile, nke ahụ bụ ihe na-egosi mgbe m kwuru ma ọ bụ dee banyere ha.
Abụ m onye na-anụ ọkụ n'obi mgbe niile. Mara banyere ha, akụkọ ihe mere eme, ọdịnala, na otu esi elekọta ha bụ ihe ntụrụndụ m hụrụ n'anya. Kesonụ ihe omuma m ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya.
Amuru m na Barcelona na iri abuo na ato gara aga, ogologo oge ka onye ochicho obi mmadu na onye nzuzu na-enwe obi uto imuta banyere egbugbu na otu ha si di nkpa na omenala uwa. Ọzọkwa, ị maraworị na "enweghị ihe egwu ọ bụla na-atọ ụtọ, enweghị mgbu ọ bụla" ... Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ihe niile gbasara egbugbu, enwere m olileanya na ị ga-enwe mmasị na edemede m.
Ọnye na -bụ Fernando Prada?
Ihe kacha amasị m bụ egbugbu. N'oge m nwere 4 (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile geeks!) Na ụdị dị iche iche. Aga m aga n'ihu na -abawanye ego ruo mgbe m mezuru echiche m n'uche. Ọzọkwa, ọ masịrị m ịmata mmalite na pụtara egbugbu.